कविता कुसुम - कविताहरु: सपथ
एककान दूइकान मैदान गाइँगुइँ चल्न थाल्यो मन्त्रीज्यूका बारेमा । गाउँको स्कूलको एउटा साधरण मास्टर राजनीतिमा लागेर मन्त्री हुने वित्तिकै कायापलट भयो उनको ।
अहिले के छैन उनीसँग ! श्रीमतिका नाउँमा आलिसानको बङ्गला । सालासालीसम्मका नाउँमा जताततै घरघडेरी जग्गा । घरमा महँगो गाडी पार्क गरेर राखेको छ । परिवारलाई सरकारी सुविधाका गाडीहरु उपलव्ध छन् । छोराको चुरीफूरी र मैमत्तता निकै बढेको छ । वैंक व्यालेन्स टन्न छ । हिजोको ख्याउटे मास्टरको जीउडाल मन्त्रीभएपछि भ्यागुते भएको छ । यो देखेर टोल छरछिमेक र गाउँबाट मन्त्री भेट्न आउनेहरु सबै छक्क पर्छन् ।
धेरैको मनमा लाग्छ सबै काम छोडेर राजनीतिमा लाग्नु पर्ने रहेछ । कमालको पेशा रातारात लामाल ! अरु त अरु आफ्नै श्रीमती पनि छक्क परेकिछिन् आफ्नो लोग्ने मन्त्री भएदेखिको उत्पात देखेर । गाउँमा मास्टरनी नानी भनेर चिनिने सीदासादा स्वास्नीमान्छे बेलाबेला रेडियो, टिभी र अखबारमा आएका समाचारले झस्किन्छिन् पनि । कतै यस्तै हुने त होइन ! त्यसलाई उनी दूर्दशा ठान्छिन ।
टोलछिमेकमा चर्चापरिचर्चा बढी नै हुन थाल्यो मन्त्रीज्यूको बद्लदो र उर्लदो जीवनशैलीप्रति ।
मन्त्राणीका कानमा पनि गाँइगुँइ पर्न थाल्यो आफ्नो लोग्नेका बारेमा चलेको चर्चा परिचर्चा । हुन त उनले पहिलेदेखि नै लाग्नेलाई लागार्थिन र बेलाबेलामा सोध्ने गर्थिन " हैन कहाँबाट आउँछ रातारात मुठाका मुठा ! अति गर्नु तर अतिसारो गर्नु त राम्रो हुदैन नि भोली फन्दामा परिएला ! भन्नेबेलामा देशर जनताको निस्वार्थ सेवा गछू भन्ने गर्ने बेलामा रातारात यस्तो लुटपात गर्ने ।"
मन्त्रीज्यू उल्टो लघार्थे "नकरा तँ । म के गर्दैछु मलाइ थाह छ । ममात्र मंगलग्रहबाट आएको हु र ! तँ गोज्याङ्री यस्ता कुराहरु बुझि्दनस् चुपलाग ।"
भोलीपल्ट अचानक मन्त्रीमण्डल विघटन भयो । विघटित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानविन अख्तियारले गर्ने समाचारसँग भ्रष्टाचारमा यीनै मन्त्रीको नाउँ सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आयो ।
मन्त्राणी अत्तालिदै मन्त्रीलाई सुनाउन आइन - "मैले त भनेको हो नि उ अब अख्तियारले समाउने भयो । अब कसरी मुख देखाउनु यो समाजमा । जति सोधे नि कहिल्यै भन्नु भएन । मसँगै लुकाउनु भो । जति कराए नि कहिल्यै मान्नु भएन । अब के गर्ने हे भगवान् !"
श्रीमतीको अत्याहटबाट अलिकति पनि विचलित नभइ मन्त्रीले गम्भीर र शान्त मुद्रामा जवाफ दिए - "नकारा केही हुदैन । यस्ता समाचार त मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुदैपिच्छे सधैं आउछन् अलिपछि आफैं हराउँछन् । बाँकी रहृयो मैले तँलाईसमेत नभन्नुको कारण चाँही मन्त्री हुँदा पद तथा गोपनियताको सपथ खाएको हुनाले मैले आफनै श्रीमतीसँग समेत पद अनुरुपको गोपनीयता भंग नगरेर इमान्दारीता निभाएको हु ।"
बोस्टन, अमेरिका ।
Posted by kavitakusum
नेपाली साहित्यले व्यवसायीक हुनु आवश्यक छ कि छैन ?
विचार सम्प्रेषण यहा
साहित्य सम्वन्धि वेव लिंकहरु
नेपाली लेखकहरुको ब्यक्तिबिवरण
नेपाली कविता डटकम्
टंक सुव्वा डट्कम्
एचके नेपाल डट्कम्
साहित्य प्रतिष्ठानको ब्लगपेजमा जान
नेपाली भुमिमा राष्ट्रपतिको पद
रुख ढलेको छैन
मान्छे, मान्छे जस्तो छैन